EX - ABSDF: " အေးသီမ"
Mya Khwar NyoFollow
" ဟဲ့.. အေးသီမ .. ထ ထ"
အမေ့အော်သံ အက်အက် ကြောင့် စောင်အစုတ်လေးထဲ ကွေးနေရာမှ သူဖျတ်ခနဲ လန့်နိုးသွား သည်။ ခြေထောက်နားမှ စိုစိစိ အထိအတွေ့ကြောင့် မောင်လေး သေးပေါက်ချ ထားပြန်ပြီဟု အိပ်ချင်မူးတူး တွေးမိသော်လည်း ... မောင်လေး သေသွားပြီ ဆိုတာ သူ ချက်ခြင်း သတိရလိုက်သည် ။ မိုးယိုတာ ဖြစ်မည်။
မောင်လေးသေတာ ၇ ရက်ကျော်ခဲ့ပြီ။ အေးသီမ မောင်လေး သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းခဲ့ပါသည်။ မဲတူးပြာခံနေသော ဝဝလုံးလုံး မောင်လေး..
ဘယ်သူမှသင်မပေးပါပဲ အေးသီမကို ပြုံးရယ်ပြတတ်သောမောင်လေး.. ။ဂျီးကြောင်းထနေသော ပါးဖောင်းဖောင်းလေးအား နမ်းမဝချင်။ မောင်လေး အခါလည် ကျော်ရုံကတည်းက အိမ်ကို အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သည်။ မအံ့သြပါနှင့် ... အမှန်တကယ် မောင်လေး ရှာကျွေးသော ထမင်းများ အေးသီမတို့ စားခဲ့ရသည်။ "အံ့ကြည် နင့်ကလေး ငှါးမလား တရက် ၂ထောင်တဲ့ .. ဆန်ဖိုးရတာပေါ့ ။ "
" ခေါ်သွားလေ .. ဟောဟိုမှာ"
"ခဏလေးအန်တီ ဘယ်ထိထွက်ကြမှာတဲ့ လဲ?? မိုးတွေကအုံ့လို့.. သမီး မောင်လေးကို အနွေးထည်လေး ဝတ်ပေးလိုက်ချင်လို့... "
" မသာမ လျှာရှည်မနေနဲ့ .. နင်ဘာဝတ်ပေးပေး ဟိုက ဟာတွေအကုန်ချွတ်ပြီး စွတ်ကျယ်စုတ်ပဲ ဆင်မှာ.. လုပ်စရာရှိတာလုပ်စမ်း ., စောက်စကားကို များတယ်"
"အမေ .. လုပ်ပါဦး မောင်လေးငိုနေတယ် .. မောင်လေးငိုနေတယ်တော့.. "
" မှတ်ပလား ဟင်.. ကိုယ့်စောက်လုပ် မဟုတ်တာ ဝင်ဝင်ရှုပ်ချင်ဦး..။ နင့်မောင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ တရပ်ကွက် လုံးက ကလေးတွေ အငှါး လိုက်နေကြတာ မမြင်ဘူးလား? ဒါအလုပ်ပဲ။ ငါတားတားနေတဲ့ကြားက နင် ထမင်းရည်တွေ ခိုးခိုးတိုက်နေလို့ နင့်မောင် ဝလုံးနေလို့ ငှါးမယ့်လူမရှိတာ.. ။ ခုလာခေါ်ဖော်ရတာပဲကျေးဇူးတင် ။ မသာမ သေမယ်။ နောက်ခါ"
အမြဲတမ်း အသားတွေ အေးစက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိ အိပ်မောကျနေတတ်သော မောင်လေး.. မိုးသည်းသောမနက်ခင်းတစ်ခုတွင် အရင်အတိုင်း အသားတွေအေးစက်ကာ မလှုပ်မယှက် အိပ်ပျော်နေသည်။ မထူးဆန်းပါ... ထူခြားတာတစ်ခုက မောင်လေး အသက်မရှူတော့တာ ဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည် မောင်လေး အဲ့လို သေသွားခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
" ဟဲ့ မထသေးဘူးလား။ .. ထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့ သတောင်းစား သူ့အဖေ အချိုးပါတော် .. စောက်ပျင်းတွေ တစ်တာ တစ်တာ ဆိုတာ။ မြန်မြန်ထ ကောင်မရဲ့ .. တိုးကျော် မမှီပဲနေမယ်"
" ဟုတ် အမေနိုးပါပြီ"
" ဟဲ့ ဒီမိုးကုန် နင်ဈေးဆက်မရောင်းရတော့ဘူး။ .. ရန်ကုန်ဘက် အလုပ်ဆင်းရမယ်.. မဆင်းခင် ၃ လခံဆေး ကြိုထိုးထားရမတဲ့.. ။ ငါ ကြည်အေးတို့နဲ့ ပြောပြီးပြီ။ .. ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ထားချည်"
ဘာကို ပြင်ဆင်ထားရမည်နည်း .... ။